Ngwongwo ikuku na-arụ ọrụ n'akụkụ ụlọ elu na ikuku oyi iji kesaa ma kwado ikuku site na usoro nke kpo oku, ikuku, na obi jụrụ ma ọ bụ ntụ oyi. Onye na-ekpuchi ikuku na mpaghara azụmahịa bụ nnukwu igbe nke nwere ihe na-ekpo ọkụ na ihe dị jụụ, onye na-afụ ọkụ, racks, ụlọ, na akụkụ ndị ọzọ na-enyere onye na-ahụ maka ikuku aka ịrụ ọrụ ya. Ejiri ikuku na-ejikọ aka na ikuku ahụ na ikuku na-esi na nhazi ikuku na-agafere ya, wee laghachi na njikwa ikuku.
AHU a kwadebere n'ụzọ ezi uche dị na ya ma ọ bụ nke na-eme ka mgbake ọkụ dị ọkụ. Okpomọkụ mgbake arụmọrụ nwere ike ịdị elu karịa 60%
Heating / jụrụ coils na-mere nke hydrophilic na mgbochi corrosive ntekwasa aluminom nku, n'ụzọ dị irè iwepụ “mmiri àkwà mmiri” na ọdịiche nke nku, na-ebelata ventilashị na-eguzogide na mkpọtụ yana asthe oriri ike, na kwes arụmọrụ nwere ike mụbara site 5% .
Mụta elu arụmọrụ elu rotor ofufe, nke bụ ala mkpọtụ, elu static mgbali, ezigbo ọrụ ma belata mmezi-akwụ ụgwọ.
A na-edozi mpempe akwụkwọ ndị dị na mpụga site na nịịl na-eduga kposara, na-edozi akwa mmiri oyi, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ilekọta na nyocha na ohere ịgba.
Onwem na ọkọlọtọ sere-esi nzacha, na-ebelata mmezi ohere na-akwụ ụgwọ.
Nke gara aga: Nnyocha Ogo maka Igwe Igwe Igwe Chiller Okpomọkụ - Igwe Igwe LHVE na-adịgide Adịgide Igwe Ọdụdọ Ntugharị Ntugharị Ntugharị Chiller - Airwoods